Idatha Yokuthola Idatha Blog - Ikhasi 3 kwangu-1311 - Xoxa ngazo zonke izici zokutholwa kwedatha
Ungaxazulula Kanjani "Iphutha eligciniwe" ku-Access
Thola ukuthi yini edala umyalezo othi “Iphutha eligodliwe” ku-Access, izindlela zokuwuvikela namathiphu awusizo wokubhekana nale nkinga. I-MS Access ijwayele ukusetshenziselwa ukwakha amasistimu wedatha wokusetshenziswa kwenhlangano. Ku-most amacala, amabhizinisi amancane ayayisebenzisa ngoba kulula ukuyithola nokuyithumela. Futhi akudingi ukuthi ube namakhono we-IT athuthukile ukuze wazi kahle ukuthi isoftware isetshenziswa kanjani. Njengoba amabhizinisi enweba futhi amarekhodi ezinkampani eba yinkimbinkimbi, most izinhlangano ziguquka ziye phezulu ...
Indlela Yokuxazulula "Ayikwazi Ukuhambisa Izinto" Ukukhishwa ku-Outlook Data File
Ukubuyiselwa Kwedatha ye-Outlook January 26, 2021
Ezigabeni ezingezansi, sizohlola ukuthi yini engadala inkinga ethi "Awukwazi Ukuhambisa Izinto" kufayela le-Outlook Data nokuthi yini ongayenza ukuxazulula inkinga. Amafayela we-MS Outlook ngokuvamile agcinwa njenge-PST noma OST idatha, ngokuya ngokulungiselelwa kwebhokisi leposi lomsebenzisi. Ngokuhamba kwesikhathi, lawa mafayili akhula ngosayizi futhi kungadingeka ukuthi uwahambise ususe kwenye indawo uye kwenye. Njengoba uzama ukuhambisa amafayela, ungahlangabezana nephutha elishiwo ngenhla. Kungani leli phutha livela Kuningi ...
Ungayilungisa kanjani “Leli fayela kungenzeka lingaphephi uma liqukethe ikhodi ebihloselwe ukulimaza ikhompyutha yakho” Iphutha ekufinyeleleni
Finyelela Ukubuyiselwa KweDatabase February 2, 2021
Funda ngenkinga "Leli fayela kungenzeka lingaphephi uma liqukethe ikhodi ebihloselwe ukulimaza ikhompyutha yakho" ku-Access nezindlela zokuyixazulula. Izizinda zolwazi ze-MS Access zidlala indima ebaluleke kakhulu ekuphathweni kwamarekhodi ebhizinisi. Lapho amafayela anjalo elinyazwa, ibhizinisi lakho lingahle lilahlekelwe kakhulu uma uhluleka ukulibuyisa ngokushesha. Ake sithi uhlangabezana nale mpendulo engenhla lapho uqala i-database yakho futhi yehluleka ukuvula, lokhu kuyinkomba yokuthi ifayela lakho le-MS Access alinaphutha. Sizokwenza kanjalo...
Ikhasinkomba 3 of 1311<Previous1234567Olandelayo >Okokugcina »